Enga anie mba tsy ho tapitra fa niato fotsiny ihany ilay nofy nampiainan’izy 23 mirahalahy teo anivon’ny Barea farany teo ary mbola ho lasa lavitra noho ireny aza no faniriana. Na tsy baolina kitra ihany aza fa ireo taranjam-panatanjahantena hafa koa dia azo lazaina ho efa miha mitsiry tsikelikely ny fanantenana fa handroso sy hisandratra ity sehatra iray. Efa tompondaka eran-tany mihitsy isika tamin’ny tsipy kanetibe. Tompondakan’i Afrika tamin’ny ady totohondry. Teo koa ny fibatana fonjamby sy ny hafa saingy tsy ny fanatanjahantena irery anefa no atao hoe raharaha sy fiainam-pirenena. Mandringa tanteraka ny fampandrosoana an’i Madagasikara raha tsy hifantoka afa-tsy amin’io. Be indray ireo tetikasa toa mitady ho tohina tapimaso hanakonana ireo asa hafa tsy vita toy ny eo amin’ny lafiny politika sy toekarena ary, indrindra, moa fa ny sosialim-bahoaka. Hadinodino teo ny fahantrana saingy tsy azo adinoina kosa ny fiantraikan’ny fahantrana amin’ny fahafaha-miainan’ny tsirairay izay efa tondroin’izao tontolo izao ho mena. Aoka tsy ho variana isika noho izany !